विद्यालय नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह #HealthMinistry • Health News Nepal
डा. जागेश्वर गौतमले भने काठमाडौं उपत्यकासहित कैलाली,कंचनपुर लगायत मुलुकका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन्।
काठमाडौं , २६ मंसिर २०७७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले नै विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयस्तरीय कक्षा सञ्चालन भइरहेकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।
प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयको सिफारिसमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले निर्णय गरेपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छ्न।
‘आधिकारिक निकायले अनुमति नदिइकन कक्षा सञ्चालन गर्नु हुँदैन। घरमै बसिरहेका बालबालिकालाई समेत संक्रमण भएको छ’, प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अहिले स्कुल खोलेर पठनपाठन गराउँदा संक्रमण बढ्न सक्छ। अभिभावकमा समेत संक्रमणको जोखिम बढाउँछ।’
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभरका कतिपय स्थानीय तहमा शैक्षिक संस्था खुलेका छन्। पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्यका प्रवक्ता गौतमले कोरोना संक्रमण कायमै रहेको बेला विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘अहिले संक्रमण कम भएको मात्र हो। संक्रमणको जोखिम यथावत् नै छ। पठनपाठन सुरु गर्दा बालबालिकाहरू संक्रमण भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’, डा. गौतमले भने।
काठमाडौ उपत्यकासहित कैलाली,कंचनपुर लगायत मुलुकका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालन कार्यविधिमा संक्रमणको जोखिम, विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कक्षा सञ्चालनलगायत मोडालिटी र विकल्प सिफारिस गरिएको छ। विद्यालयले भने गुणस्तरीय भौतिक दूरीलगायतका सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन नसक्दा कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीसमेत संक्रमित हुन पुगेका छन्। ललितपुरको गोदावरीस्थित नवज्योति माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण भएपछि पठनपाठन बन्द गरेको छ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Education ministrySchool not start
Pingback: स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेसी त्रिपाठीले गरे ५ जना निर्देशकहरुको जिम्मेवारी हेरफेर #HealthMinistry • Health News Nepa